I-American Council on Science and Health Archives - Ilungelo Lokukwazi lase-US
Imibuzo yoMhlangano Wabaninimasheya waseBayer: nguCarey Gillam
Posted on April 28, 2020 by UStacy Malkan
Ekuqaleni konyaka, uzakwethu UCarey Gillam kwanikelwa indawo yokukhuluma yiqembu labanikazi bamasheya eBayer emhlanganweni wonyaka wenkampani eBonn, eJalimane. Ngenxa ye-Covid-19, umhlangano obukhona phakathi kwabantu ukhanseliwe futhi abaninimasheya beBayer bahlangana emhlanganweni umhlangano obonakalayo ngo-Ephreli 28 ngo-10: 00 Isikhathi Sasehlobo EsiseYurophu. Esikhundleni sokuhambela lo mcimbi, uNksz Gillam wamenywa ukuthi azothumela i-video futhi abhale namazwana abhalwe phansi, esiwathumele lapha.
Ukuthola eminye imininingwane ngomhlangano wabaninimasheya weBayer kanye nokuvuselelwa kwamacala abandakanya inkampani, bheka eyakwaGillam IMonsanto Roundup neDicamba Trial Tracker.
Kuthunyelwe nguCarey Gillam
Sawubona, Igama lami nginguCarey Gillam, ngiyintatheli futhi ngingumbhali osechithe iminyaka engama-22 ngicwaninga futhi ngibhala ngomkhakha wezolimo nangezinqubo zebhizinisi nemikhiqizo yeMonsanto, eyathengwa yiBayer ngoJuni ka-2018.
I wabhala incwadi mayelana nenkampani kanye nokwanda kwebhizinisi layo le-Roundup herbicide elakhelwe ezungeze i-glyphosate yamakhemikhali, futhi ngibhalile futhi ngabika ngemibhalo yangaphakathi yeMonsanto ekhombisa ukuthi uMonsanto uchithe amashumi eminyaka efihla imininingwane ngezingozi zezempilo zemikhiqizo yayo kubathengi nakubalawuli.
Imibhalo yangaphakathi ikhombisa nokuthi umsebenzi wami wobuntatheli wasongela iMonsanto kakhulu kangangokuba yaqalisa uhlelo lokuthi zama ukwehlisa isithunzi bese ungithulisa. Eminye imibhalo yangaphakathi yeMonsanto ikhombisa ukuthi inkampani isebenze ngokufanayo iminyaka ukudicilela phansi ososayensi nabanye abantu abaningi abafuna ukwaba imininingwane ngobungozi beRoundup. Okunye kwalokhu kuhlukunyezwa kwaqhubeka ngemuva kokuthi iBayer ithenge iMonsanto e2018.
Imininingwane eyiqiniso ngokusobala ibilokhu isongela iMonsanto neBayer.
Isikhathi sokuthi lokho kuguquke. Njengoba iBayer iqhubekela phambili nemisebenzi yayo eqhubekayo yebhizinisi kulo nyaka, iBayer kumele iqinisekise abathengi nabatshalizimali ukuthi ngeke ivumele imikhuba ekhohlisayo kaMonsanto iqhubeke.
Ngabe iBayer izathembisa ukumisa ngqo nangokungaqondile ekuhlukumezeni izintatheli nososayensi ukuqala ngokushesha?
Ngabe iBayer izathembisa ukumisa uxhaso nokusebenzisana namaqembu angaphambili anomlando wokuhlukumeza izintatheli nososayensi ngenkulumo-ze engamanga? La maqembu afaka phakathi Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo futhi Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project.
Kunobufakazi obuningi bokuthi ngaphezu kwezingozi zezempilo ezibangelwa yiRoundup, ukusetshenziswa okubanzi kwe ukhula lwe-glyphosate-based ngaphezulu kwezitshalo ezakhiwe ngezakhi zofuzo kwenze umonakalo omkhulu kwikhwalithi yenhlabathi, impova, kanye nempilo yemvelo ngokujwayelekile. Lokhu kusetshenziswa ngokweqile futhi kwenze i-glyphosate i-herbicide engasebenzi kahle kakhulu.
Ngabe iBayer izathembisa ukuthi noma yimiphi imishanguzo emisha yokubulala ukhula elethwe emakethe kwenziwa kanjalo ngokusobala okugcwele kanye neqiniso mayelana nobungozi empilweni yabantu kanye nezemvelo?
Indaba yezenzo ezimbi zikaMonsanto yaziwa emhlabeni wonke. IBayer ingakwazi futhi kufanele isebenze ukuguqula lolo daba futhi iqede indlela ekhohlisayo neyonakalisayo iMonsanto eyenze amashumi eminyaka.
Futhi okubaluleke kakhulu, njengoba umhlaba ubhekene nenani labantu elikhulayo nawo ubhekene nezinsongo ezikhulayo ngesimo sezifo, ukuguquka kwesimo sezulu, kanye nemithombo yamanzi, yomoya neyokudla engcoliswe ubuthi.
IBayer inethuba manje lokusebenzisa ingcebo yayo kanye nobuchwepheshe besayensi ukuvikela nokuqhubekisela phambili impilo yomphakathi neyendawo ezungezile, hhayi ukunezela emonakalweni wokufuna nje inzuzo.
Nginxusa iBayer ukuthi ilisebenzise leli thuba.
Intatheli, umbhali kanye nomcwaningi onentshisekelo yomphakathi
Ukudla Okucatshangwayo Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, umhlangano wabanini bamasheya we-bayer, IBonn Germany, UCarey Gillam, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, i-glyphosate based herbicides
Isithangami Esizimele Sabesifazane: Iqembu Elikhokhelwa yi-Koch Livikela I-Pesticide, Amafutha, Izimboni Zogwayi
The Inkundla Yabesifazane Ezimele iyinhlangano engenzi nzuzo leyo abalingani neMonsanto, ivikela amakhemikhali anobuthi ekudleni nasemikhiqizweni yabathengi, futhi iphikisana nemithetho enganciphisa amandla ezinkampani. Ixhaswe kakhulu yizisekelo ezinamaphiko angakwesokudla eziphoqa ukuphika kwesayensi yezulu, IMF kwaqala ngo-1991 njengomzamo wokuvikela manje iNkantolo Ephakeme Yobulungiswa (nowayengummeli waseMonsanto) UClarence Thomas njengoba ayebhekene namacala okuhlukumeza ngokocansi. Ku-2018, iqembu futhi ivikelekile INkantolo Ephakeme iJustice Brett Kavanaugh ngesikhathi ebhekene nezinsolo zokuhlukumeza ngokocansi, futhi uchaze uKavanaugh njengo “Umpetha wabesifazane."
Bona: “Hlangana 'Nabesifazane' Abenza Umsebenzi Ongcolile Wabazalwane baseKoch, ” nguJoan Walsh, The Nation
With isabelomali cishe ama- $ 2 million ngonyaka, i-Independent Women 's Forum manje ithi isebenzela izinqubomgomo “ezithuthukisa inkululeko.” Izinhlelo zayo zifaka phakathi ukunxenxa nokukhuthaza ukwesulwa kwemikhiqizo enobuthi, nokususa icala ekulimaleni kwezempilo nezemvelo kude nezinhlangano ezingcolisayo kanye nasezibophezelweni zomuntu siqu. Ngo-2017, iqembu i-gala yaminyaka yonke eWashington DC, ebigubha ilungu lebhodi le-IWF uKellyanne Conway njengompetha wabesifazane, ibixhaswe yizinkampani zamakhemikhali nezogwayi.
Funda kabanzi ngaleli gala nabaxhasi balo kuHuffPost, “Ipolitiki Yokungazali Nomdlavuza, ”NguStacy Malkan.
Ukuxhaswa ngezimali ngamabhiliyoni ezinhlangano nezinkampani
Iningi labanikeli abaziwayo be-Independent Women Forum ngabesilisa, njengoLisa Graves kubikwe iCentre for Media and Democracy. I-IWF ithole ngaphezulu kwe- $ 15 million kusuka ezisekelweni ezinamaphiko angakwesokudla ezikhuthaza ukwehliswa kwemithetho kanye nokuzimela kwenkampani, ngokusho kuka idatha eqoqwe yiGreenpeace USA. Abanikeli abahamba phambili be-IWF, neminikelo engaphezu kwezigidi ezingama- $ 5, yiDonors Trust kanye neDonors Capital Funds, izimali eziyimfihlo "zemali emnyama" ixhunywe namafutha kawoyela UCharles noDavid Koch. Lezi zimali zixhuma imali evela kubaxhasi abangaziwa, kufaka phakathi izinkampani, ukuze amaqembu avela eceleni alwela intshisekelo yebhizinisi.
Umxhasi ophezulu we-IWF: imali emnyama evela kubaxhasi abangadalulwanga
Izisekelo zomndeni wakwaKoch zinikele ngqo ngaphezu kwe- $ 844,115 kanti abanye abaxhasi abaphezulu bafaka iSarah ISchaife Foundation, lo Isisekelo seBradley, iRandolph Foundation (ihlumela le- Isisekelo seRichardson), Futhi ISearle Freedom Trust - bonke abaxhasi abahola phambili be- ukuphika kwesimo sezulu-nesayensi imizamo nemikhankaso yoku vikela izibulala-zinambuzane futhi uzigcine zingalawulwa.
I-ExxonMobil futhi UFiliphu Morris futhi baxhase i-IWF, kanye nefemu kagwayi ebizwa nge-IWF ohlwini lwamagama “izinkomba ezivela eceleni"Futhi"labo abahlonipha imibono yethu. ” URush Limbaugh unikele okungenani ngekota yesigidi ku-IWF, okuyi "uyamvikela noma nini lapho engena ocansini lobulili, ”Ngokusho kwendatshana ka-Eli Clifton kuThe Nation.
UHeather Richardson Higgins, Sihlalo weBhodi ye-IWF kanye ne-CEO yeZwi Elizimele Labesifazane, ingalo yokubungaza ye-IWF, ubambe izikhundla eziphezulu ezisekelweni eziningi ezinamaphiko okudla, kufaka phakathi IRandolph Foundation, lo USmith Richardson Foundation futhi Ubuhle obuyindilinga.
UKellyanne Conway, Umeluleki weWhite House nowayengumphathi womkhankaso kaTrump, uyi Ilungu lebhodi le-IWF. Abaqondisi I-Emeritae Faka ULynne V. Cheney, unkosikazi kaDick Cheney futhi UKimberly O. Dennis, umongameli webhodi labaqondisi be Abaxhasi Trust nomongameli kanye ne-CEO ye ISearle Freedom Trust.
UNancy M. Pfotenhauer, owayekade eyisishoshovu seKoch Industries, washiya amaKoch Industries ukuba abe umongameli we-IWF ngo-2001 futhi kamuva wasebenza njengeSekela likaSihlalo weBhodi Yabaqondisi be-IWF. Unomlando omude we ukugqugquzela amandla angcolile nokuphokophela ukwehliswa kwemithetho yezimboni ezingcolisayo.
I-ajenda ye-IWF ilandela eduze uhlelo lokunxenxa nokuthumela imiyalezo ngezintshisekelo zemboni kagwayi, uwoyela kanye namakhemikhali. Okulandelayo ezinye zezibonelo:
Iphika isayensi yezulu
A 2019 i-tweet ne-athikili ovela kwi-Independent Women Forum uncoma uMengameli uTrump “ngobuhlakani” ngokungathathi izinyathelo ukunqanda ukuguquka kwesimo sezulu.
Greenpeace ichaza i-IWF njenge- "Koch Industries Climate Denial Group" lokho “okusakaze ukwaziswa okungelona iqiniso ngesayensi yesimo sezulu futhi kuthinta nomsebenzi wabaphikisi besimo sezulu.”
UJane Mayer ubike The New Yorker ngo-2010: “Abazalwane (bakaKoch) banikele ngemali emaqenjini angacacile, futhi, njenge-Independent Women Forum, ephikisana nokwethulwa kwesivuvujikelele njengeqiniso lesayensi ezikoleni zomphakathi zaseMelika. Kuze kube ngo-2008, leli qembu laliqhutshwa nguNancy Pfotenhauer, owayekade eyisishoshovu seKoch Industries. UMary Beth Jarvis, iphini likamongameli wenkampani ephethwe yiKoch, usebhodini laleli qembu. ”
Uphikisana nokufundiswa kwesayensi yezulu ezikoleni
The Denver Post yabika ngo-2010 ukuthi i-IWF “icabanga ukuthi ukufudumala kwembulunga yonke '' kuyisayensi engenamsebenzi 'nokuthi ukuyifundisa kusabisa izingane zesikole ngokungadingekile.” Ngomkhankaso obizwa nge- "Balanced Education for Everyone," i-IWF iphikisana nemfundo yesayensi yezulu ezikoleni, lelo qembu kuchazwe njengo "Ukwazisa ukufudumala kwembulunga yonke okwethusayo."
UMongameli we-IWF uCarrie Lucas ubhala ngakho “ukungabaza okwandayo ngokuguquguquka kwesimo sezulu” futhi uthi “umphakathi ungakhokha kakhulu ngalokhu kuphazamiseka.”
Esiphakamisweni sika-Ephreli 21, 2016 esiya kuMonsanto, IWF icele iMonsanto ukuthi inikele ngama- $ 43,300 emicimbini ye- “Super Women of Science” eyenzelwe ukwehlisa ukwesekwa kwezepolitiki kweProposition 65, umthetho waseCalifornia ovimbela izinkampani ukuthi zikhiphe amakhemikhali ayingozi ezindleleni zamanzi futhi zidinga ukuthi zazise abathengi ngokutholakala kwamakhemikhali anobuthi. Imicimbi ehlongozwayo ibiyingxenye yephrojekthi ye-IWF ye- “Culture of Alarmism” eyasungulwa “ukuqeda ukuzwelana nabezindaba ngobungozi abaseMelika ababhekene nabo ngemikhiqizo esiyisebenzisayo, ukudla esikudlayo nemvelo ezungeze imindeni yethu.”
NgoFebhuwari 2017, uMonsanto wabambisana ne-IWF emcimbini owawunesihloko esithi "Ukudla Nokwesaba: Ungawathola Kanjani Amaqiniso Ngempucuko Yanamuhla Ye-Alarmism," kanye ne I-podcast ye-IWF ngaleyo nyanga kwaxoxwa ngokuthi "I-Monsanto ivuselelwa kanjani yizishoshovu."
I-IWF iphusha amaphuzu okukhuluma eMonsanto kanye nemboni yamakhemikhali: ukukhuthaza ama-GMO kanye nezibulala-zinambuzane, ukuhlasela imboni engokwemvelo nomama abakhetha ukudla okuphilayo, nokuphikisana nokusobala kumalebula okudla. Izibonelo zifaka:
Umthetho wokulebula weVermont's GMO awubuwula. (Umbheki)
Ukufakwa ilebula kwe-Sinister GMO kuzodala ukuthi izindleko zokudla zikhuphuke kakhulu. (IMF)
Ukuxokozela kwe-anti-GMO kuyisongo sangempela enhlalakahleni yemindeni. (Buyekeza National)
Omama abanengqondo badinga ukubuyisela emuva kumama onamahloni nokuzizwa benecala ngokulandisa kokudla okuphilayo. (I-podcast ye-IWF)
Abagxeki be-GMO banonya, bayize, banesikhundla futhi bafuna ukuphika labo abaswele. (New York Post)
Iphrojekthi ye- "Culture of Alarmism", esethiwe kabusha i- "Project for Progress and Innovation," iphethwe nguJulie Gunlock, obhala amabhulogi amaningi aphikisana nokuvikelwa kwezempilo yomphakathi kanye ukuvikela izinkampani. Uchaze “ukwenqaba kwe-FDA ukukhuthaza ama-e-cigarettes” njengo “inkinga yezempilo yomphakathi."
Izimpikiswano 'zikaPhilips Morris PR'
Ngo-Agasti 2017, IWF kubanjwe i-FDA ukwamukela uPhilip Morris ' Ugwayi we-IQOS, bethi abesifazane badinga le mikhiqizo ngezizathu ezahlukahlukene zebhayoloji ukubasiza bayeke ukubhema ugwayi ojwayelekile.
“Kusobala ukuthi i-FDA ayihlosile ukujezisa abantu besifazane, ngenxa yobulili babo. Kodwa-ke, yilokho kanye okuzokwenzeka uma abesifazane bekhawulelwa ekubhemeni imikhiqizo yokuyeka leyo ngokwemvelo engakwazi ukubanikeza usizo abaludingayo lokuyeka ugwayi wendabuko, ”kubhala i-IWF.
Ephendula incwadi ye-IWF, uStanton Glantz, PhD, uProfesa Wezokwelapha e-UCSF Centre for Tobacco Control Research and Education, uthe: “Leli yi-standard Philip Morris PR. Asikho isiqinisekiso esizimele sokuthi i-IQOS iphephe njengogwayi noma ukuthi isiza abantu bayeke ukubhema. ”
Ompetha “inkululeko yokudla” esebenzisana nezinhlangano
I-IWF ihlasela i-US Food and Drug Administration “njengonondindwa bakahulumeni,” ngokwesibonelo ichaza i-ejensi njenge “ukudla amaMarx"Futhi"kungalawuleki ngokuphelele”Yokukhipha ukuholwa ngokuzithandela kubakhiqizi bokudla ukusika amazinga e-sodium.
Umcimbi wangoJuni 2017 we-IWF uzame ukudambisa ukwesaba ngokuqondiswa kwezempilo yomphakathi
Ngo-2012, i-IWF yethule “Abesifazane Ngenkululeko YokudlaIphrojekthi "yokubuyisela emuva esimweni somzanyana futhi ikhuthaze ukuzibophezela komuntu siqu" kokukhetha ukudla. I-ajenda ibibandakanya "nemithetho yokudla, isoda kanye nentela yokudla okulula, isayensi engenamsoco nokudla kanye nokwethuka kwemikhiqizo yasekhaya, imininingwane engeyona mayelana nokukhuluphala nendlala, nezinye izinhlelo zokudla zikahulumeni, kubandakanya nezidlo zasemini zesikole."
Ngokukhuluphala ngokweqile, i-IWF izama ukususa ukunakwa ekuziphenduleni kwezinkampani nasezinkingeni zomuntu siqu. Kulokhu ingxoxo noT Thom Hartmann, UJulie Gunlock we-IWF uthi izinkampani akumele zisolwe ngenkinga yokukhuluphala yaseMelika kepha kunalokho “abantu benza izinqumo ezimbi futhi ngicabanga ukuthi abazali bayazihlola ngokuphelele.” Isixazululo, uthe, ukuthi abazali bapheke kakhulu, ikakhulukazi abazali abahlwempu kwazise banenkinga enkulu yokukhuluphala.
Ihlasela omama ngokuzama ukunciphisa ukuvezwa kwezibulala-zinambuzane
I-IWF iphusha imiyalezo ngemboni, isebenzisa amaqhinga okucasha, ukuzama ukukhipha omama abakhathazekile ngemithi yokubulala izinambuzane; isibonelo esivelele yile New York Post ka-2014 esihlokweni, "Ubushiqela be-Organic Mommy Mafia" kaNaomi Schafer Riley. Ngaphansi kwengubo yokukhononda mayelana "nokuhlazeka komama," uRiley - ngubani Umuntu we-IWF kepha akazange akudalule lokho kubafundi - imizamo yokuhlazeka nokusola omama abakhetha ukudla okuphilayo. I-athikili kaRiley itholwe ngokuphelele ngamaqembu angaphambili embonini kanye nemithombo ayethule ngamanga njengezimele, kubandakanya Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, iqembu eliphambili leMonsanto; the I-Alliance for Food and Farming kanye noJulie Gunlock we “I-Culture of Alarmism Project” ye-IWF, naye ongazange akhonjwe kule ndatshana njengomsebenzi we-IWF. Ukuthola okwengeziwe ngalesi sihloko, bona i- "Ukuhlaselwa kwe-Organic: Ukuziba isayensi ukwenza icala lokulima ngamakhemikhali”(I-FAIR, 2014).
Ozakwethu abanamaqembu angaphambili embonini yamakhemikhali
IWF ibambisana namanye amaqembu angaphambili ezinkampani njenge Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, umvikeli oholayo wamakhemikhali anobuthi obelokhu ekhona ixhaswe nguMonsanto futhi Syngenta, kanye nezinye amakhemikhali, okwelapha kanye nogwayi izinkampani namaqembu ezimboni.
NgoFebhuwari 2017 I-podcast ye-IWF, I-ACSH ne-IWF “bakwethukile ukwethuka kukaRachel Carson kumakhemikhali anobuthi”
I-ACSH “ibisemuva ngokuphelele” kwe-IWFisiko lencwadi ye-alarmism”Imizamo ephikisayo yokususa amakhemikhali ayingozi emikhiqizweni yabathengi.
Imicimbi ye-IWF ehlasela omama abakhathazekile ngamakhemikhali anobuthi, njengale "hazmat parenting" umcimbi, afakiwe UJosh Bloom we-ACSH nemboni yamakhemikhali umbhali wezobudlelwano nomphakathi UTrevor Butterworth.
I-Intercept, ”AbakwaKoch Brothers Operatives Fill Top White House Positions,” nguLee Fang (4/4/2017)
The Nation, "Hlangana 'Nabesifazane' Abenza Umsebenzi Ongcolile Wabazalwane bakaKoch,” kaJoan Walsh (8/18/2016)
Isikhungo Sezindaba Nentando yeningi, "Abanikeli Abaziwa Kakhulu Benhlangano Ezimele Yabesifazane ngabesilisa," nguLisa Graves (8/24/2016)
Isikhungo Sezindaba Nentando yeningi, "Isiqinisekiso: Isithangami Sabesifazane Abangazimele Sazalelwa Ekuvikeleni uClarence Thomas kanye neFight Right," nguLisa Graves noCalvin Sloan (4/21/2016)
Slate, “Isiqiniseko Sokukhetha: Kwenzeka kanjani ukuthi 'Abesifazane beJaji uThomas' baphenduke amandla amakhulu,” nguBarbara Spindel (4/7/2016)
Iqiniso, "Iforamu Yabesifazane Ezimele Isebenzisa Uphawu Lokudukisa Ukududula I-Ajenda Yephiko Lakwesokudla," kaLisa Graves, uCalvin Sloan noKim Haddow (8/19/2016)
Ngaphakathi Ubuhle,"Imali Eseqenjini Lamaqembu Abesifazane Abalondolozayo Isalwela Impi Yamasiko," nguPhilip Rojc (9/13/2016)
The Nation, ”Qagela ukuthi Yiliphi Iqembu Labesifazane Rush Limbaugh elinikele ngamakhulu ezinkulungwane zamaDola ku? Ukusikisela: iyona evikela yena noma nini lapho engena emsakazweni wobulili, ”ngu-Eli Clifton (6/12/2014)
The New Yorker, ”The Koch Brothers Covert Operations,” kaJane Mayer (8/30/2010)
I-Oxford University Press, "Righting Feminism: Conservative Women and American Politics," nguRonnee Schreiber (2008)
Ngaphakathi Ubuhle, ”Bheka Ubani Oxhasa Leli qembu Eliphezulu Labafazi Abalondolozayo,” nguJoan Shipps (11/26/2014)
Ukulunga nokunemba ekubikeni, “Abesifazane Abasadla ngoludala ba-Right for Media Mainstream; Abezindaba Ekugcineni Sebethole Abanye Besifazane Ukuba Babathande, ”nguLaura Flanders (3/1/1996)
ithunyelwe ekuqaleni ngo-Okthoba 6, 2018 futhi yavuselelwa ngoFebhuwari 2020
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, ACSH, I-Alliance for Food and Farming, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, Imfundo elinganisiwe yawo wonke umuntu, Isisekelo seBradley, UCarrie Lucas, UCarrie Lukas, UCharles noDavid Koch, Iphrojekthi Yesiko Le-Alarmism, Imali Yabanikeli, Abaxhasi Trust, I-ExxonMobil, FDA, UHeather R. Higgins, Inkundla Yabesifazane Ezimele, Izwi Labesifazane Elizimele, IMF, UJosh Bloom, UJulie Gunlock, Kellyanne Conway, UKimberly O. Dennis, Koch Brothers, Ama-Koch Industries, ULynne V. Cheney, UMary Beth Jarvis, Monsanto, UNancy M. Pfotenhauer, UNawomi Schaefer Riley, Ubuhle obuyindilinga, UFiliphu Morris, IRandolph Foundation, Rush Limbaugh, ISarah Scaife Foundation, ISearle Freedom Trust, USmith Richardson Foundation, Syngenta, UTrevor Butterworth, Abesifazane Ngenkululeko Yokudla
UDkt Fedoroff ukhuthaza izinhlangano ezidukisa umphakathi mayelana nesayensi nobudlelwano bazo ezimbonini.
Ngo-2017, uDkt Fedoroff wakhuthaza uMkhandlu WaseMelika Wezesayensi Nempilo Incwadi ethi “junk science” eceleni kososayensi ababili abahambisana namaqembu aphika isayensi yezulu kanye nokunxenxa imikhiqizo kagwayi.
Ngesikhathi sakhe sokuba ngumongameli nosihlalo we-AAAS, i ngobukhulu emhlabeni umphakathi wesayensi eyahlukahlukene, uDkt Fedoroff waqokomisa lezo zindima ukuhlinzeka ngosizo lwezepolitiki embonini yezolimo: iBhodi labaPhathi be-AAAS ngaphansi kosihlalo wayo yakhipha isitatimende esibekelwe isikhathi sezepolitiki sokuphikisana nokulebula kwe-GMO ngo-2012; ngenkathi umongameli wenhlangano yesayensi ngo-2011, uDkt Fedoroff wasiza ekunqobeni isiphakamiso se-US EPA esasizodinga imininingwane eyengeziwe yezempilo nokuphepha yezitshalo ze-GMO, ngokusho kwama-imeyili achazwe ngezansi. Bheka, UNina Fedoroff, i-AAAS kanye nomkhakha wezobuchwepheshe bezolimo. UDkt Fedoroff ne-AAAS abaphendulanga ezicelweni zempendulo.
Ngokuvumelana ne amanothi avela emhlanganweni we-EPA ka-Okthoba 2009, imithetho ehlongozwayo "izodidiyela kakhulu izidingo zedatha ezikhona ezisetshenziswa njengamanje," futhi izofaka imikhakha emihlanu yedatha nolwazi: ukwenziwa komkhiqizo, impilo yabantu, imiphumela engahlosiwe, ukuphela kwemvelo nokumelana ukuphathwa. EPA umemezele imithetho ehlongozwayo kwiRejista Yenhlangano ngo-Mashi 2011.
I-GMO, Fihla Kamuva, Uphenyo lwethu I-AAAS, AgBioWorld, U-Alan Moghissi, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, U-Angela Logomasini, Bayer, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, Iphini likajinja, Izimpendulo ze-GMO, I-GMO, Hillary Clinton, UJay Byrne, UJon Entine, isayensi engenamsoco, UKetchum, UMat Winkler, Monsanto, UNina Fedoroff
I-Glyphosate Spin Check: Izimangalo Zokulandelela Mayelana Nokubulala Ukhula Okusetshenziswa Kakhulu
Posted on April 26, 2019 by UStacy Malkan
Phakathi kwempikiswano yomhlaba jikelele mayelana nokuphepha kwe-herbicides esekwe ku-glyphosate efana neMonsanto's Roundup, kwenziwa izimangalo eziningi ukuvikela ukuphepha komkhiqizo. Ekuvukeni kwe- izinqumo ezimbili zakamuva zamajaji othole ukuthi i-Roundup iyinto ebaluleke kakhulu ekudaleni i-non-Hodgkin lymphoma, sihlole ezinye zalezi zimangalo futhi sazihlola ukuthi zinembile yini.
Uma unezibonelo eziningi ze-glyphosate spin ongathanda sizihlole, sicela ubathumele i-imeyili ku-stacy@usrtk.org noma tweet kithi @USRighttoKnow.
UMark Lynas, uCornell Alliance weSayensi
ICornell Alliance yeSayensi iwebhusayithi (Novemba. 2017)
Lo mbhalo kaMark Lynas uqukethe izitatimende eziningi ezinganembile nezidukisayo. Njengabaningi abagqugquzela imikhiqizo ye-glyphosate, izimangalo lapha zigxile ekuzameni ukwehlisa isithunzi i-International Agency for Research on Cancer (IARC), ebeka i-glyphosate njenge-carcinogen yabantu ngo-2015.
FAKA ISICELO: I-IARC "yigatsha elincane elaziwayo futhi elincanyana le-World Health Organisation" "elithola cishe yonke into ebanga umdlavuza"
IQINISO: I-IARC yisikhungo esikhethekile sokucwaninga ngomdlavuza se-WHO esinamaphaneli ochwepheshe aqukethe ososayensi abazimele abavela emikhakheni ehlukahlukene yocwaningo lomdlavuza. Eminyakeni yayo engama-50 umlando, IARC inayo kuhlolwe izinto eziyi-1,013 futhi kutholakale ama-49% alabo "bengahlukaniswa ngokuya komzimba wayo kubantu"; Ama-20% ahlukaniswa njengaziwa noma mhlawumbe yi-carcinogenic kubantu.
FAKA ISICELO: "Okusalungiswa kokuqala kokuhlolwa kwe-IARC kuguqulwe kakhulu ngesikhathi sekwephuzile ukukhomba ekutholeni umdlavuza - noma ngabe isayensi abebeyihlola ikhomba kude nalokhu"
IQINISO: Lesi simangalo sitholwe ngombiko weReuters onamaphutha kaKate Kelland wokuthi washiya amaqiniso abalulekile, kuhlanganise iqiniso lokuthi iningi lemininingwane i-IARC engazange iluthathe kusuka “kokungakapheli kokuqala” kwakusuka esihlokweni sokubuyekeza esabhalwa ngokubambisana ngusosayensi waseMonsanto. I-athikili yokubukeza "ayizange inikeze imininingwane eyanele yokuhlola okuzimele iziphetho ezafinyelelwa ngusosayensi waseMonsanto nabanye ababhali," Kusho IARC. UKelland ubhalile izindaba eziningana ukugxeka i-IARC; imibhalo ekhishwe ngo-2019 qinisekisa ukuthi uMonsanto wayenesandla ngasese kokunye ukubika kwakhe.
U-Lynas usebenzise omunye umthombo ukuvikela izimangalo zakhe ngokungalungile e-IARC: UDavid Zaruk, owake waba khona umkhakha wamakhemikhali wemboni yamakhemikhali owake wasebenzela inkampani yezobudlelwano nomphakathi iBurson-Marsteller.
FAKA ISICELO: IGlyphosate “iyikhemikhali eliyingozi kakhulu kwezolimo emhlabeni”
IQINISO: Lesi sitatimende asisekelwe kusayensi. Izifundo zixhuma i-glyphosate ku-a uhla lwezinkinga zezempilo kufaka phakathi umdlavuza, ukuphazamiseka kwe-endocrine, isifo sesibindi, ukukhulelwa okufushane, ukukhubazeka kokuzalwa kanye nokulimala kwamabhaktheriya amathumbu azuzisayo. Ukukhathazeka kwezemvelo kufaka nemithelela emibi ku inhlabathi, izinyosi futhi izimvemvane.
SOURCE: UMark Lynas uyi owayeyintatheli waphenduka ummeli wokuphromotha ngemikhiqizo yezolimo. Usebenzela i- ICornell Alliance for Science, umkhankaso we-PR ebekwe eCornell University exhaswa yiBill & Melinda Gates Foundation ukukhuthaza nokuvikela ama-GMO kanye nezibulala-zinambuzane.
ACSH iwebhusayithi (Okthoba 2017)
FAKA ISICELO: Umbiko we-IARC we-carcinogenicity we-glyphosate wawuyicala "lokukhwabanisa kwesayensi"
IQINISO: I-ACSH isekele izimangalo zayo "zokukhwabanisa" emithonjeni emibili efanayo uMark Lynas weCornell Alliance for Science osetshenziswe ngenyanga eyodwa kamuva ukuhlasela i-IARC kuwebhusayithi yeCornell: eyokuqala umkhakha wamakhemikhali wemboni yamakhemikhali UDavid Zaruk kanye ne alungile ku-Reuters ukuthi kulandele amaphuzu okukhuluma ukuthi UMonsanto unikeze intatheli.
SOURCE: Umkhandlu WaseMelika Wezesayensi Nezempilo a iqembu langaphambili ethola uxhaso kusuka amakhemikhali, okwelapha kanye nogwayi izinkampani, futhi ifaka izinsizakalo zayo kumaqembu ezimboni ngemikhankaso yokuvikela umkhiqizo, ngokusho kwe- kudalulwe imibhalo yangaphakathi. Ama-imeyili asuka ku-2015 asungula lokho IMonsanto yayixhasa i-ACSH futhi ngacela iqembu ukuthi libhale ngombiko we-IARC glyphosate. Umsebenzi we-ACSH uphendule ngokuthi bese bevele bebandakanyekile emkhakheni wokushicilelwa wenkantolo ephelele mayelana ne-agrichemicals, phthalates kanye ne-diesel.
UYvette d'Entremont, owaziwa nge- "Sci Babe"
I-Self Magazine esihlokweni (Okthoba 2018)
IZIMANGALO: “Ngezifundo ezingaphezu kuka-800 kuyo, alukho ucwaningo oluye lwabonisa izingxenye ze-Roundup ezidala umdlavuza”… “akuzange kube nezifundo ezinkulu ezithembekile ezibonisa ukuxhumana okuyimbangela phakathi kweRoundup nomdlavuza.”
IQINISO: Izifundo eziningi ezithembekile zixhumanisa iRoundup noma ingxenye yayo eyinhloko yeglyphosate nomdlavuza, kufaka phakathi ucwaningo olwethulwe ku-EPA ngawo-1980s ukuthi ososayensi be-EPA ngaleso sikhathi bathi kwakuwubufakazi bokukhathazeka ngomdlavuza. Kunezifundo eziningi kakhulu ongazibala, kepha izingcaphuno zingatholakala ku-2015 I-International Agency for Research on Cancer Monograph eGlyphosate.
Ngokwengeziwe, i- wide ukuhlaziywa kwesayensi wamandla okubanga umdlavuza we-glyphosate herbicides eshicilelwe ngoFebhuwari 2019 athola ukuthi abantu abanokuchayeka okuphezulu baba nengozi eyengeziwe yokuthola uhlobo lomdlavuza obizwa nge-non-Hodgkin lymphoma.
SOURCE: U-Yvette d'Entremont "ungumhleli onikelayo" kuSelf Magazine onekholamu ebizwa nge- “SciBabe Explains.” ISelf Magazine ayivezi kubafundi bayo ukuthi iSciBabe abalingani nezinkampani ezikhiqiza imikhiqizo yazo. Ngo-2017, inkampani enandisa yokufakelwa iSplenda ihlangene neSciBabe ukusiza "ukunika amandla abalandeli be-SPLENDA® Brand ukuthi babambe iqhaza elibonakalayo ekuqhakambiseni izinganekwane mayelana ne-sucralose." Izinkampani zamakhemikhali zixhase ezinye zezingxoxo zakhe zokukhuluma ezingqungqutheleni zokulima.
UGeoffrey Kabat, udokotela wezifo zezifo
Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project iwebhusayithi (Okthoba 2018)
FAKA ISICELO: IGlyphosate “icwaningisiswe kahle kakhulu ngobuthi kanti ukugxila okutholakala kubantu kuphansi kakhulu kangangoba asikho isidingo sokuqhubeka nokufunda… akukho lutho olusele ukufakazela olunye ucwaningo!”
IQINISO: Ebufakazini obufungelwe bufakazelwa ubufakazi obubhekene namacala aqhubekayo abhekene noMonsanto nomnikazi wayo uBayer AG, owayeyi-CEO yeMonsanto UHugh Grant wavuma inkampani ayikaze yenze ucwaningo lwe-epidemiology lwe-glyphosate-based herbicide formulations inkampani ethengisa. Le nkampani iphinde yafuna ukuvimba i- Ukuhlola ubuthi yokwakheka kwe-glyphosate yi-Agency for Toxic Substances and Registry Registry.
Ngaphezu kwalokho, lawa mazwana, uDkt Kabat awasho njengomthombo ongaziwa, awawanaki amaqiniso amabili abalulekile: izifundo ezizimele zixhuma i-glyphosate ezinhlotsheni eziningi izinkinga zezempilo nokukhathazeka kwemvelo, kanye nobufakazi obuvela emafayilini enkantolo buveza ukuthi iMonsanto iphazamise ukuhlolwa kwesayensi nokulawulwa kwe-glyphosate (bona izibonelo nemithombo lapha, lapha, lapha, Futhi lapha).
Ngokusho kweJaji uVince Chhabria, owengamele icala lakamuva lombuso elaphumela ekulimaleni kweMonsanto, amaRandi ayizigidi ezingama-80, abamangali baveze ubufakazi obukhulu ukuthi iMonsanto ayisebenzisanga ngendlela efanelekile nokuphephile ekuphepheni komkhiqizo wayo. ” Ijaji wabhala futhi:
Mayelana nezinsalela zezibulala-zinambuzane kubantu, isayensi yakamuva ikhulisa ukukhathazeka ngokuthi imithethonqubo yamanje ayinikeli ngokuvikelwa kwezempilo okwanele. Bheka ukubikwa nguCarey Gillam, "Amakhemikhali ekudleni kwethu: Uma 'kuphephe' kungenzeka kungaphephi ngempela,”Nezincazelo zososayensi lapha, lapha futhi lapha.
SOURCE: UDkt Geoffrey Kabat ubuhlobo obude embonini kagwayi futhi ushicilele amaphepha avuna umkhakha kagwayi oxhaswe imboni kagwayi. Usebenza ebhodini labaqondisi benhlangano yabazali yeGenetic Literacy Project, okuyiyona isebenza neMonsanto kumaphrojekthi we-PR. UKabat ubuye ebhodini lokweluleka leqembu langaphambili Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo.
UPatrick Moore, umxhumanisi we-PR
Ukuxoxwa ngevidiyo neCanal + (Mashi 2015)
FAKA ISICELO: "Ungaphuza ingxenye eyodwa kwezine ye- [glyphosate] futhi ngeke ikulimaze."
IQINISO: Ngisho neMonsanto ithi akufanele uphuze i-glyphosate. Ngokusho kwale nkampani iwebhusayithi, “I-glyphosate ayisona isiphuzo futhi akumele ifakwe - njengoba nje ubungeke uphuze imoto yokugeza imoto. Kuhlale kubalulekile ukusebenzisa imikhiqizo ngenhloso ehlosiwe futhi njengoba kuqondiswe kwilebula. ” (Okuthunyelwe kuphinde kucacise ukuthi uMoore “akayena umuntu olwela amalungelo abantu waseMonsanto noma umsebenzi.”)
SOURCE: UMorell uvezwe njengomunye wabasunguli beGreenpeace "obiza iqembu lakhe langaphambili" njengoba ephikisana nokususwa kwemikhiqizo enobuthi noma izimboni ezingcolisayo. Ngokusho kukaGreenpeace, "Kwasukasukela, UDkt. Patrick Moore wayeyilungu laseGreenpeace lokuqala. Manje usengumxhumanisi wobudlelwano nomphakathi ezinkampanini ezingcolisa iGreenpeace esebenza ukuzishintsha. ” Ngo-2014, uMorey wafakaza ekomitini Lezigele laseMelika ukuthi abukho ubufakazi besayensi bokuthi imisebenzi yabantu ibangela ukufudumala kwembulunga yonke.
UKevin Folta, PhD, uprofesa e-University of Florida
Tweets 2015 futhi 2013
FAKA ISICELO: “Ngake ngaphuza i- [glyphosate] phambilini ukukhombisa ukungabi nabungozi”… “Ngikwenze bukhoma futhi ngizokwenza futhi. Kumele ixutshwe w / coke noma c-berry juice. Kunambitheka insipho. Ayikho i-buzz ”
IQINISO: Ngenkathi uDkt Folta kungenzeka ukuthi wayidla i-glyphosate, lesi iseluleko esibi esivela kumthombo ongathembekile. Njengoba kuchaziwe ngenhla, ngisho neMonsanto ithi akufanele uphuze i-glyphosate.
SOURCE: USolwazi Folta uke udukise umphakathi ezikhathini eziningi mayelana nezixhumanisi zakhe zomkhakha wezolimo. Ku-2017, uDkt Folta wamangalela intatheli ephumelele i-New York Times nePulitzer-Prize u-Eric Lipton ngokubika Ukusebenzisana kukaFolta okungadalulwanga neMonsanto ukusiza ukunqoba ilebula ye-GMO. Icala lalikhona ixoshiwe.
U-Alison van Eenennaam, PhD, isazi sezakhi zofuzo, u-UC Davis
ingxoxo yevidiyo kwiReal News Network (Meyi 2015)
FAKA ISICELO: “Ngicabanga ukuthi kunezihlaziyo eziningana eziphelele kakhulu ze-meta eziye zenziwa muva nje ezibonisa ukuthi ayikho imiphumela eyingqayizivele yobuthi noma ye-carcinogenicity ehambisana nokusetshenziswa kwe-Roundup. Kwakukhona i-German Federal Institute for Risk Assessment esanda kubuyekeza amakhulukhulu ezifundo zobuthi kanye nemibiko ecishe ibe yinkulungwane eshicilelwe, futhi yaphetha ngokuthi idatha ayikhombisanga i-carcinogenic noma i-mutagentic properties ye-glyphosate, futhi nokuthi i-glyphosate ayinabuthi ekuzaleni, ekuzaliseni, noma embryonic ukukhula kombungu ezilwaneni zaselebhu ... Futhi angizukubiza iJalimane njengezwe lapho ungalindela ukuthi benze khona ukuhlolwa kobungozi okungabhekanga ukuthi ithini imininingwane. ”
IQINISO: A Umbiko we-2019 ethunywe ngamaLungu ePhalamende e-European Union athola ukuthi i-ejensi yokuhlola ubungozi yaseJalimane "ikopisha futhi inamathisele amapheshana avela ezifundweni zeMonsanto." Bheka ukubika ku-Guardian ngu-Arthur Neslen, "Ukuvunyelwa kwe-EU glyphosate kwakususelwa embhalweni obhalwe uMonsanto, umbiko uthola."
SOURCE: UDkt van Eenennaam ungumgqugquzeli ohamba phambili wezilwane nezitshalo ezakhiwe ngezakhi zofuzo, futhi ungummeli oshisekayo wokwehliswa komthetho. Imibhalo ikhombisa ukuthi uxhumanisile nezinkampani zezolimo kanye namafemu abo obudlelwano bomphakathi ku-PR nokuthumela imiyalezo.
Ifilimu eliyi-Food Evolution
Le documentary yobude besici ka-2017 ikhuthaza ukudla okwenziwe ngezakhi zofuzo njengesixazululo sendlala emhlabeni kepha icwebezela impikiswano ebalulekile enkabeni yenkulumompikiswano ye-GMO: ukuthi ngabe i-Roundup, umuthi wokubulala ukhula izitshalo eziningi ze-GM ezenzelwe ukumelana nawo, ubangela umdlavuza. Le filimu ayikhulumi ngisho nangombiko we-IARC othole ukuthi i-glyphosate iyinto engaba ngumdlavuza womuntu, futhi ithembele emithonjeni emibili kuphela yokuthi i-glyphosate ayiyona inkinga.
FAKA ISICELO: Le filimu ikhombisa izithombe zikaMonsanto uRobb Fraley enikeza inkulumo; lapho ilungu lezilaleli limbuza ngezifundo ezixhumanisa i-glyphosate nomdlavuza noma ukukhubazeka kokuzalwa, uFraley waqhweba isandla sakhe ngokunganaki wathi zonke lezo zifundo "zingumbumbulu wesayensi."
IQINISO: Ubufakazi obuvela ezifundweni zezilwane kanye nemininingwane ye-epidemiological eshicilelwe emaphephabhukwini ahloniphekile axhumanisa i-glyphosate nemithelela emibi eminingi efaka umdlavuza kanye nezinkinga zokuzalwa.
FAKA ISICELO: Umlimi uthi i-glyphosate “inobuthi obuncane kakhulu; iphansi kunekhofi, iphansi kunosawoti. ”
IQINISO: Ukuqhathanisa ubuthi bokuvezwa kwesikhashana kwe-glyphosate ezintweni ezifana nekhofi noma usawoti akubalulekile futhi kuyadukisa; Ukukhathazeka ngezixhumanisi zomdlavuza kususelwa ekuvezweni okungapheli, okuhlala isikhathi eside ku-glyphosate.
SOURCE: IFood Evolution yakhiqizwa nguScott Hamilton Kennedy, elandiswa nguNeil deGrasse Tyson futhi yaxhaswa yi-Institute for Food Technologists, iqembu lezebhizinisi lezimboni. Izitshudeni eziningi ziyibize ngo ifilimu ye-propaganda, futhi abantu abaningana okwaxoxwa nabo ngefilimu bachaza i- inqubo yokuqopha ngobuqili nenenkohliso. UProfesa we-NYU uMarion Nestle ucele ukukhishwa kule filimu, kodwa umqondisi wenqaba.
Inkundla Yabesifazane Ezimele
IMF iwebhusayithi (Agasti 2018)
FAKA ISICELO: "Iqiniso liwukuthi, i-glyphosate akuyona i-carcinogenic."
IQINISO: Lo mbhalo kaJulie Gunlock awunikeli usekelo lwesayensi ngezimangalo zawo; okuwukuphela kwezixhumanisi okuholela kumabhulogi e-IWF angaphambilini asola amaqembu ezemvelo ngokuqamba amanga futhi "esabisa omama ngokungadingekile."
SOURCEIsithangami Esizimele Sabesifazane ithuthukisa imikhiqizo kagwayi, iphika isayensi yezulu kanye nabalingani neMonsanto emicimbini yokuvikela izibulala-zinambuzane. I-IWF ixhaswa kakhulu yizisekelo zamaphiko angakwesokudla ezikhuthaza ukwehliswa kwemithetho yezimboni ezingcolisa.
I-International Food Information Council
IFIC iwebhusayithi (Janawari 2016)
FAKA ISICELO: "Ukuzimisela kwe-IARC [ukuthi i-glyphosate iyi-carcinogen yomuntu okungenzeka] kutholakale ngochwepheshe abaningi ukuthi bakhiphe ngaphandle inqwaba yezifundo ezingatholanga bufakazi bokuthi i-glyphosate iyicancer. Ochwepheshe baphinde bathola ukuthi ukubuyekezwa kwe-IARC kususelwa kusayensi enamaphutha nengenalusizo, abanye baze bafika ngisho ekutheni isiphetho 'besingalungile neze.' ”
IQINISO: I-IFIC incike emithonjeni yezimboni ngalezi zimangalo, exhumanisa nezindatshana zikaVal Giddings, PhD, owayengumphathi weqembu lezokuhweba waphenduka Umxhumanisi we-PR embonini yezolimo; noKeith Solomon, isazi sezobuthi owaye kuqashwe uMonsanto ukuhlola umbiko we-IARC.
SOURCE: The Umkhandlu Wezokwaziswa Wokudla Womhlaba Wonke, exhaswa yizinkampani ezinkulu zokudla namakhemikhali, ithuthukisa futhi ivikele ushukela, okokunandisa okokuzenzela, izithasiselo zokudla, izibulala-zinambuzane, ukudla okusetshenzwe nama-GMO. Uhlelo lwe-Monsanto PR lukhonjwe i-IFIC njengomunye "wabalingani bemboni" lokho kungasiza ukuvikela i-glyphosate ekukhathazekeni komdlavuza.
Lesi sithombe esithunyelwe ekhasini le-IFIC glyphosate (bese sisuswa ngemuva kokuthi sisinakile) siyisibonelo sohlobo lwemiyalezo umkhakha wezokudla oyisebenzisayo ukuzama ukukholisa abesifazane ukuthi bathembe “ochwepheshe” babo.
izibulala-zinambuzane U-Alison Van Eenennaam, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, UGeoffrey Kabat, glyphosate, IARC, Umkhandlu Wokwaziswa Kwezokudla Womhlaba Wonke, UKevin Folta, UMark Lynas, Monsanto, UPatrick Moore, Sci Babe, UC Davis, University of Florida, Yvette d'Entremont